၁.၇.၂၀၂၀ (၁၇)ကြိမ်မြော က် အောင်ဘာေ လ သိန်းတစ်သောင်း ခွဲ စဆုံး ( Update )နောက်ဆုံးသတင်း – Zartiman
အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ် ။ အစွမ်းထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက် ဂါထာ ရှေးကျမ်းရင်း တစောင်မှာ ဖော်ပြ ထားပြီး အစွမ်း ထက်မြက်တဲ့ ထီပေါက်ဂါထာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂါထာရဲ့အဓိပ္ပါယ်အတိုချုပ်က…“ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်က ကာဏ္ဍဝေန မထေ ရ်ကြီးသည် ပထမ စာရေးတံမဲကို အမြဲတမ်း ပေါက်ခဲ့၏ ထို့အတူ ကျွန်ုပ်သည်လည်းဤသို့ ဖြစ်ရပါစေ သတည်း” ဟု ဆိုထားပါတယ်။ ရှေး ဟောင်း ပေစာ တစ်ခုထဲ မှာလည်း ဒီဂါထာရဲ့ အစွမ်းကို အထူး အစွမ်း ထက်မြက်ကြောင်း ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အခုဂါထာကို မိတ်ဆွေတွေ အတွက် စေတနာရှေ့ထားလို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဂါထာကို မဖော်ပြမီမှာ အရင်ဆုံး ထီပေါက်ချင်တယ် ဆိုရင် သင်ဟာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာရဲ့သီလကို ဆောက်တည်ရပါ လိမ့်မယ်။ဂါထာမန္တန်တွေရဲ့ အစွမ်းဆိုတာ ရွတ်ဖတ်နိုင်မှုအစွမ်း၊ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား စိတ်စွမ်းအားတို့ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အစွမ်းထက်မြက်မှုက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူဘဲ ပိုနိုင်၊ လျှော့နိုင်တာ ရှိပါ တယ်။ ဒီဂါထာကို သင်ဟာ ရွတ်ဖတ်ပြီး ထီပေါက်ချင်တယ် ဆိုရင် လိုက်နာရမယ့် အချက်တွေတော့ ရှိပါတယ် လွယ်လွယ်တော့ မရနိုင် ပါဘူး။
၃။ နောက်ဆုံး အချက်ကတော့ ဒီဂါထာကို နေ့စဉ်မှန်မှန် စိပ်သွားပြီး လစဉ် ထီထိုးပေးပါက ၆ လအတွင်း ထီပေါက်နိုင်ပါတယ်။
ရှားပါး ပြီး အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဂါထာ တစ်ပုဒ်ပါ အာလုံးပဲ ထီပေါက်ကံကို ဆွတ်ခူးနိုင်ကြပါစေ သိန်းဆုတွေ ပေါက်ကြပါစေ ။
မင်္ဂ လာပါ … (၁၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ထွက်ပါပြီ ….
Like လုပ်ထားပေးပါ ခင်ဗျာ
သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆု – ည ၈၅၃၀၉၅
သိန်းတစ်သောင်းဆု – ဖ ၇၈၇၃၅၄
သိန်းငါးထောင်ဆု- ဃ ၈၄၇၉၃၀ ၊ ဓ ၄၀၆၈၂၀
သိန်နှစ်ထောင်ဆု – မ ၈၁၈၅၄၉ ၊ ဇ ၈၈၇၅၁၀ ၊ ဌ ၃၂၀၀၁၈ ၊ ဝ ၅၇၉၁၉၇
သိန်တစ်ထောင်ဆု – ဍ ၆၀၈၃၁၉ ၊ ဝ ၁၂၀၃၆၄ ၊ ဌ ၁၄၄၁၆၅ ၊ ကဃ ၈၉၈၃၅၀ ၊ ယ ၅၅၄၅၉၀ ၊ ဆ ၃၅၆၉၁၀ ၊ ဂ ၃၉၄၃၂၅
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၃)သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၅) လုံးအစဉ်လိုက်တူရမယ်
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၂)သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၄) လုံးအစဉ်လိုက်တူရမယ်
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၁)သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၃) လုံးအစဉ်လိုက်တူရမယ်
ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၅)သောင်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၂) လုံးအစဉ်လိုက်တူရမယ်
ထီဖွင့်ပွဲမပြီးသေးပါ…..ဆုများကျန်ပါသေးသည် ..UPdate ထပ်ဖြည့်ပေးမှာမို့ Page ကို Like & Share လုပ်ထားပါ…
ထီပေါက်စဉ် ဇူလိုင်လ ( ၁ )ရက်နေ့
၁.၇.၂၀၂၀ (၁၇)ကွိမျမွော ကျ အောငျဘာေ လ သိနျးတဈသောငျး ခှဲ စဆုံး ( Update )နောကျဆုံးသတငျး
အစှမျးထကျမွကျတဲ့ ထီပေါကျဂါထာကို တငျပေးလိုကျ ပါတယျ ။ အစှမျးထကျမွကျတဲ့ ထီပေါကျ ဂါထာ ရှေးကမျြးရငျး တစောငျမှာ ဖျောပွ ထားပွီး အစှမျး ထကျမွကျတဲ့ ထီပေါကျဂါထာ ဖွဈပါတယျ။ ဂါထာရဲ့အဓိပ်ပါယျအတိုခြုပျက…“ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားရှိစဉျက ကာဏ်ဍဝနေ မထေ ရျကွီးသညျ ပထမ စာရေးတံမဲကို အမွဲတမျး ပေါကျခဲ့၏ ထို့အတူ ကြှနျုပျသညျလညျးဤသို့ ဖွဈရပါစေ သတညျး” ဟု ဆိုထားပါတယျ။ ရှေး ဟောငျး ပစော တဈခုထဲ မှာလညျး ဒီဂါထာရဲ့ အစှမျးကို အထူး အစှမျး ထကျမွကျကွောငျး ဖျောပွထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
အခုဂါထာကို မိတျဆှတှေေ အတှကျ စတေနာရှထေ့ားလို့ ဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။ ဂါထာကို မဖျောပွမီမှာ အရငျဆုံး ထီပေါကျခငျြတယျ ဆိုရငျ သငျဟာ ကိုးကှယျရာ ဘာသာရဲ့သီလကို ဆောကျတညျရပါ လိမျ့မယျ။ဂါထာမန်တနျတှရေဲ့ အစှမျးဆိုတာ ရှတျဖတျနိုငျမှုအစှမျး၊ ကိုယျ့ရဲ့ ကိုယျကငျြ့တရား စိတျစှမျးအားတို့ အပျေါမှာ မူတညျပွီး အစှမျးထကျမွကျမှုက တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျမတူဘဲ ပိုနိုငျ၊ လြှော့နိုငျတာ ရှိပါ တယျ။ ဒီဂါထာကို သငျဟာ ရှတျဖတျပွီး ထီပေါကျခငျြတယျ ဆိုရငျ လိုကျနာရမယျ့ အခကျြတှတေော့ ရှိပါတယျ လှယျလှယျတော့ မရနိုငျ ပါဘူး။
၃။ နောကျဆုံး အခကျြကတော့ ဒီဂါထာကို နစေ့ဉျမှနျမှနျ စိပျသှားပွီး လစဉျ ထီထိုးပေးပါက ၆ လအတှငျး ထီပေါကျနိုငျပါတယျ။
ရှားပါး ပွီး အဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ ဗုဒ်ဓဘာသာ ဂါထာ တဈပုဒျပါ အာလုံးပဲ ထီပေါကျကံကို ဆှတျခူးနိုငျကွပါစေ သိနျးဆုတှေ ပေါကျကွပါစေ ။
မင်ျဂ လာပါ … (၁၇)ကွိမျမွောကျ ထီပေါကျစဉျ ထှကျပါပွီ ….
Like လုပျထားပေးပါ ခငျဗြာ
သိနျးတဈသောငျးငါးထောငျဆု – ည ၈၅၃၀၉၅
သိနျးတဈသောငျးဆု – ဖ ၇၈၇၃၅၄
သိနျးငါးထောငျဆု- ဃ ၈၄၇၉၃၀ ၊ ဓ ၄၀၆၈၂၀
သိနျနှဈထောငျဆု – မ ၈၁၈၅၄၉ ၊ ဇ ၈၈၇၅၁၀ ၊ ဌ ၃၂၀၀၁၈ ၊ ဝ ၅၇၉၁၉၇
သိနျတဈထောငျဆု – ဍ ၆၀၈၃၁၉ ၊ ဝ ၁၂၀၃၆၄ ၊ ဌ ၁၄၄၁၆၅ ၊ ကဃ ၈၉၈၃၅၀ ၊ ယ ၅၅၄၅၉၀ ၊ ဆ ၃၅၆၉၁၀ ၊ ဂ ၃၉၄၃၂၅
ဝဝေဆောဆာပဒသော(၃)သိနျးဆု အက်ခရာနဲ့ရှဂေ့ဏနျး (၅) လုံးအစဉျလိုကျတူရမယျ
ဝဝေဆောဆာပဒသော(၂)သိနျးဆု အက်ခရာနဲ့ရှဂေ့ဏနျး (၄) လုံးအစဉျလိုကျတူရမယျ
ဝဝေဆောဆာပဒသော(၁)သိနျးဆု အက်ခရာနဲ့ရှဂေ့ဏနျး (၃) လုံးအစဉျလိုကျတူရမယျ
ဝဝေဆောဆာပဒသော(၅)သောငျးဆု အက်ခရာနဲ့ရှဂေ့ဏနျး (၂) လုံးအစဉျလိုကျတူရမယျ
ထီဖှငျ့ပှဲမပွီးသေးပါ…..ဆုမြားကနျြပါသေးသညျ ..UPdate ထပျဖွညျ့ပေးမှာမို့ Page ကို Like & Share လုပျထားပါ…
ထီပေါကျစဉျ ဇူလိုငျလ ( ၁ )ရကျနေ့